Nke a nwere ike ịbụ Samsung Galaxy S8 ọzọ | Akụkọ akụrụngwa
Nke a nwere ike ịbụ Samsung Galaxy S8 na-esote
El Samsung Galaxy S8 ọ ga-abụrịrị na a ga-ewepụta ya na Mobile World ọzọ na-esote nke a ga-eme na Barcelona, ​​bụ nke oge ka dị. Agbanyeghị, na agbanyeghị na Samsung gbadoro ụkwụ na ịkwalite Samsung Galaxy S7 na ihe ngosi na-esote nke Galaxy Noyte 7, o yiri ka ụfọdụ ndị ọrụ amalitelarị ịrụ ụka banyere ọkwa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ South Korea nwere ike ịbụ.
Dịka ọmụmaatụ, na TechRadar anyị ahụla vidiyo ị nwere ike ịhụ n'elu nke isiokwu a, na nke ha chọrọ igosipụta ihe okike, na-egosi ihe Galaxy S8 zuru oke ga-adị.
O doro anya na Samsung agaghị ewepụta Galaxy S8 nke yiri nke a, ma ọ bụ ihe na-atọ ụtọ mgbe niile ịhụ ihe ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike iche n'echiche na n'ezie ụfọdụ ụlọ ọrụ ekwentị mkpanaaka nwere ike inyere ha aka inweta echiche maka ọdịnihu. N'etiti ha ma eleghị anya, ọ nwere ike na- 3D gburugburu ahụmahụ okwu okwu, kamera abuo ma obu mgbanwe nke aru.
Offọdụ atụmatụ ndị anyị nwere ike ịhụ na vidiyo a banyere Samsung Galaxy S8 bụ ihe na-atọ ụtọ. Fewfọdụ yiri ka ọ dị mfe iji nweta ya na ndị ọzọ agaghị ekwe omume, mana enwere olile anya na anyị nwere ike ịhụ ọ bụghị naanị na flagship Samsung ọhụrụ, kamakwa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ụfọdụ n'ime ha ka smartphones ndị na-abịa n'ahịa ahụ na-aga n'ihu na-enye ozi ọma.
Kedu ihe ị chere banyere ọrụ a nke Samsung Galaxy S8?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Nke a nwere ike ịbụ Samsung Galaxy S8 na-esote
Tupu ịwepụta ihe atụ ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ mere karịa ebe ọ bụ na ebe a, anyị enweghị ike ịkparịta ụka, enwere obere mgbaàmà, ọdachi onwe onye
Zaghachi Carlos achitte
Ogbodo 13 dijo
Martin, Samsung, dị ka ụlọ ọrụ niile, na-eweta njedebe kwa afọ ọ bụla n'ihe gbasara ụyọkọ kpakpando nkịtị na ọnwa 1 maka ndetu, nke ga-abụ afọ 6 maka ọhụụ ọhụụ ọ bụla, na-agbanyeghị na ọ dị ka ị naghị agwa onwe gị nke ọma
Ma ekwentị ma ọ bụ oriọna, ngwaọrụ Xiaomi mbụ na United States ga-abụ Xiaomi Mi Box gam akporo TV.
Bubble Zoom na-eme ka ọ dị mfe ịgụ ihe ndị na-atọ ọchị na Akwụkwọ Play